बच्चाहरु को लागि आर्थोपेडिक तकिया
बच्चाहरु को लागि आर्थोपेडिक तकिया एक विशेष उपकरण हो जो कि दोषहरु र musculoskeletal प्रणाली को विरूपण को रोकन को लागि प्रयोग गरिन्छ। अधिकतर अवस्थामा, आमा बिना उनको गर्न गर्न प्रयोग गरिन्छ। Toddlers को लागि सामान्यतया घने फलालान्ज डायपर प्रयोग गर्दछ, दोस्रो सेप्टेम्बर4पटक छ।
शिशुहरूले कसरी आर्थोपेडिक तकिया देखाउँछन्?
जस्तै नै माथि उल्लेख गरिएको छ, बच्चाहरूका लागि आर्थोपेडिक तकिए अधिकांशतया अवस्थामा विभिन्न विकारहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले, उदाहरणका लागि, जन्मजात क्रेभोसहेसँग वा कुपोषणको हड्डीहरूको संलयनको गलत गठन, आर्थोपेडिक डाक्टरहरूले यस प्रकारको तकिया प्रयोग गरेर सिफारिस गर्छन्। यसैले, मेरी आमाले प्रश्न गरेको छ कि बच्चालाई रोगविज्ञानको अन्त्यमा एक आर्थोपेडिक तकिया चाहिन्छ कि? स्वस्थ बच्चाहरूको लागि यो बिदाको लागि कुनै विशेष आवश्यकता छैन।
एक आर्थोपेडिक तकिया उन बच्चाहरु को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जो केवल एक हेड मा लगातार एक टाउको बदल को आदत मा हो। यसको डिजाइनमा पार्श्व समर्थनको उपस्थिति यस अवस्थालाई सुधार गर्न र गर्दन मांसपेशी को ओभरगोरो को रोकथाम मा मदद गर्नेछ, जो अंततः अत्याचार को विकास को लागी नेतृत्व गर्दछ।
यसको अतिरिक्त, आर्थोपेडिक तकिया उन बच्चाहरु को लागि उपयुक्त छ, जो प्रायः पुनर्गठन को रूप मा , रोगविज्ञान को उपस्थिति मा देखिए। यो एक सपना मा हुन सक्छ, जो बच्चा को क्षमता संग भरी छ आफ्नो आफ्नै उल्टो चोरी गर्न। यस्तो टाउको, टाउकोको समर्थन, यस अवस्थाको संभावनालाई समावेश गर्दैन।
केही अवस्थामा, यस्तो एक तकिया प्रयोग गर्न सकिन्छ, सहायक यन्त्रको रूपमा हाइपरटोनियाको उपचारमा। साथै, यसको अधिग्रहण को लागि संकेत रिवर्स परिस्थिति हुन सक्छ, जब मांसपेशी मांसपेशी को टोन मा कमी छ।
कसरी बच्चाको लागि एक आर्थोपेडिक तकिया छान्नु हुन्छ?
तपाईंको बच्चाको लागि एक आर्थोपेडिक तकिया छनौट गर्न र खरिद गर्नुभन्दा पहिले, एक डाक्टरसँग परामर्श गर्नु र निर्धारण गर्नुहोस् कि तपाईको स्थितिमा यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यो प्रकारका उत्पादनहरू खरीद गर्दा, सबै भन्दा पहिले, कुन सामग्री बनाइएको हो भनेर ध्यान दिनुहोस्। तिनीहरू सबै प्राकृतिक हुनुपर्छ। यस अवस्थामा, फुलरसँग उत्कृष्ट हावा पारगम्यता हुनुपर्छ। यस अवस्थामा, बच्चाको टाउकोमा पसीनाको विकासको सम्भावना बाहिरिएको छ। सामान्यतया, यस प्रकारको उत्पादनहरूमा ठोस आधार छ, जसले निद्राको समयमा बच्चाको टाउकोको निरन्तर, सही स्थिति सुनिश्चित गर्छ।
एक महत्वपूर्ण प्यारामिटर आर्थोपेडिक सम्मिया को आकार हो। अधिकतर अवस्थामा, यो प्रकारको बिदाले बच्चाको उमेरलाई इंगित गर्दछ जुन यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के हो भने आर्थोपेडिक तकिया प्रयोग गर्ने कुनै सम्भावना छैन?
व्यक्तिगत घटनाहरूका लागि, एक विशेष आर्थोपेडिक तकिया बच्चाहरु को लागि डिजाइन गरिएको छ। यो प्रकारको उपकरण, पहिलो नज़रमा, सामान्य तकियाबाट भिन्न छैन। यद्यपि, यदि आवश्यक भएमा, "कान" को पक्षका पक्षहरूमा संलग्न गर्न सकिन्छ, जुन हेडको पार्श्व समर्थनको लागी जिम्मेवार छन्। यस प्रकारको निर्माणमा बालबालिकाको लागि एक आर्थोपेडिक तकिया छ, जसले बच्चाको टाउकोको तीव्र पङ्क्तिलाई रोक्छ, र बाक्लो सडकमा ड्राइभ गर्दा।
यसैले, आर्थोपेडिक तकिया एक विशेष उपकरण हो जुन तपाईंलाई ग्रीवा रीढ़ को सही गर्न को लागी अनुमति दि्छ। यो केवल त्यस्ता अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ जब यसको लागि आवश्यक छ, जुन आमाले मात्र परीक्षा पछि मात्र चिकित्सकलाई जानकारी दिन्छन्।
बाघ कसरी आकर्षित गर्ने?
नानीका कर्तव्यहरू बालबालिकामा
पूर्वस्कूलकर्ताहरूका लागि साइको-जिमनास्टिक्स
बालबालिकाको स्लाइडिङ रोलर्स
बेनेडिक्ट कम्बरब्याच र उनका छोरा
बच्चालाई कसरी बर्तनको लागि सोध्न सिकाउनुहुन्छ?
हारेको बारेमा कार्टून
बालबालिकाको नृत्य चटाई
आमा कसरी आकर्षित गर्ने?
बालबालिकाको थर्मल अंडरवियर मेमोनो ऊन बनाइयो
बच्चाले3वर्षको उमेरमा बोल्दैन
स्कुलको शिक्षाको शिक्षा
ट्रेनमा बच्चा लिनु भन्दा?
माउन्टेनस्टन मासिक कल गर्दै
Tukums - पर्यटक आकर्षण
मिलको राम्रो र खराब छ
बच्चाहरु मा माइक्रोस्पोरिया
फूलहरू वियोला बीउबाट बढ्दै - रोपण र हेरविचारको लागि महत्त्वपूर्ण नियमहरू
Buckwheat porridge - सरल डिश खाना पकाउने नयाँ मूल तरिका
कुत्तेबाट रक्सी गुलायो
संसारमा यो सुन्दर फोटो शूटले तपाईंलाई स्थानमा तोडफोड गर्नेछ!
मरिच र मकर - प्रेम सम्बन्धमा संगतता
"सबैभन्दा सुन्दर आपराधिक" को पूर्व पत्नीले विभाजन पछि गर्भाशय र अंतरंग जीवनबारे साक्षात्कार दिए
एकल पट्टि बोर्ड
बच्चा किन आधा खुला आँखा संग सुत्नुहुन्छ?
क्रेनबेरीको रस कसरी बनाउने?
आत्मालाई निको पार्दै
तपाईंले लिनुभएको कुरालाई दिइयो, हामी दृढतापूर्वक सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँ कन्डोम पनि खरिद गर्नुहुन्छ